Home Wararka MW Eritereeya oo ergo ka ah Farmaajo oo ku sugan Imaraadka iyo...
MW Eritereeya oo ergo ka ah Farmaajo oo ku sugan Imaraadka iyo Farmaajo oo lagu wado in uu halkaa u safro
Dhowrkii maalin ee u danbeeysay waxaa ku sugnaa magalaada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Madaxweynaha dalka Eritereeya Isaias Afwerki. Safarkaa oo la xiriira sii adkeynta xiriirka labada dal ayaa hadana waxaa si gaar ah looga hadlayaa isku soo dhawaynta MW Farmaajo iyo dowlada Imaaradka. Safarka ayaa yimid dhowr cesho ka dib markii MW Afwerki u safar ku tagay Magaalada Muqadishu.
Inta uu safarka ku joogay Soomaaliya ayaa MW Isaias Afwerki waxa uu u kala dabqaaday labada dhinac ee Farmaajo iyo Shiikh Maxamed Zayid. MW Isaias Afwerki ayaa ku qanciyay MW Farmaajo in uu ku soo biiro Isbahaysiga garabka la ah Imaaraadka iyo Sacuudiga. Intii uu Afwerki ku sugnaa Muqadishu ayaa waxa qadaka teelfanka ku wada hadalay Abiy Axmad iyo Farmaajo kaas oo la iskula gartay in dib si buuxda loogu soo nooleeyo Xiriirka Labada dhinac.
Dowlada Imaaraadka ayaa sharuudo badan ku xirtay in ay dib xiriir ula furaan Farmaajo. Hadaba Madaxweyneha Eriyeteeya ayaa asbuucaan waxaa uu kulamo xasaasi ah la qaatay mas’uuliyiinta dalka Imaaraadka. Warar ay MOL ka heshay ilo lagu kasloon yahay ayaa sheegayo in Farmaajo safar ku tagi doono dalka Imaaradka asbuucyada soo socda si loo soo afjaro carqaladaha ka dhex jira labada dhinac.
Dad badan ayaa qaba sababta keentay in MW Farmaajo lagu qasbi in uu imaaraadka uu la xirto ay tahay 1) In Imaaraku bixiyo lacagaha ku baxaya ciidanka dhawaan la keeni doono Soomaaliya oo ka imanaya dalalka Itoobiya iyo Eritereeya 2) iyo in la sii adkeeyo go’doominta iyo cunaqabayenta lagu hayo dalka Jabuuti si loogu qasbo in ay ka baxdo heshiisyadda ay la gashay dalalka Shiinaha iyo Turkiga.
Qorshaha Safarka Farmaajo ayaa waxa uu imaanayaa iyada oo taageerayaasha dowlada ku eedaynayaan dowlada Imaaradka in ay ka danbeeyso mooshinka laga keenay MW Farmaajo. Su’aasha iswaydiinta leh ayaa ah; waa maaxay talaabada uu arintaan ka qaadi doono baarlamaanka Soomaaliya?
Previous articleShiikh Sharif oo si toos ah ugu biiray Mucaaradka iyo Xildhibaanada Himilo oo dardar galiyay Mooshinka Farmaajo
Next articleQaramada Midoobay oo magacowday guddiga qubarada Soomaaliya (Akhriso Magacyada)
Somaliya oo aan Weli Kenya kala Hadlin Dhaqangelinta Xukunkii ICJ ee Xadka Badda
Weerar iyo qaraxyo la qorsheeynayay in lagu qaadi Guriceel oo la fashiliyay
Al-Shabaab oo sheegatay dilka Guddoomiyihii hore ee Gobolka Hiiraan
Kenya begins oil exploration in disputed Lamu Basin wells
Cabdifatax Ibrahim (Ronaldo) - January 23, 2022
Kenya has stepped up oil and gas exploration activities in the Lamu Basin after rejecting a ruling over a four-decade maritime dispute with Somalia. Petroleum...
U.S. Navy Interdicts Stateless Vessel Previously Caught Smuggling Weapons
MANAMA, Bahrain – On Jan. 18, U.S. 5th Fleet ships interdicted a stateless fishing vessel in the Gulf of Oman that was caught smuggling...
Cabdifatax Ibrahim (Ronaldo) - January 21, 2022
The Horn Of Africa States: A Proposition – OpEd
I wrote this article and a few others that would follow in November 2004. I thought it is an opportune time to republish them...
Amina Cali (Amina Sonna) - January 20, 2022
New revelations about atrocities by Somali soldiers in Ethiopia’s Tigray war are casting a spotlight on an emerging military alliance that has reshaped the...
Kheyre iyo Fahad Yaasiin Oo Qatar u tagay Abaabulka Dagaalka Galmudug...
Maxaadna ogeeyn oo ka taagan Marko!!